जिल्ला कारागार बागलुङमा क्षमता भन्दा चार गुणा बढि कैदीबन्दी !::Online News Portal from State No. 4
जिल्ला कारागार बागलुङमा क्षमता भन्दा चार गुणा बढि कैदीबन्दी !
बागलुङ, २२ जेठ– पुरुषतर्फ १८ र महिलातर्फ ७ जनाको क्षमता भएको जिल्लाको कारागारमा ४ गुणा बढि कैदीबन्दी रहेका छन् । १८ पुरुष र ७ महिला गरी २५ जना रहनुपर्ने कारागारमा ८० पुरुष र १३ महिला राखिएको हो । क्षमता भन्दा धेरै जना भएकोले बन्दीहरुको सरसफाईमा नकारात्मक असर परेको छ । ‘खानेपानी समेत अभाव छ, हामीले नुहाउने र कपडा धुन पाएका छैनौं’ बन्दीका नाईके सुर्य नेपालीले भने, ‘माग गरेपनि सुनुवाई नहुँदा सास्ती खेपेका छौं ।’ उनीहरुले पालो गरेर सुत्नुपर्ने बाध्यता छ । कोठाभित्र अटाउन कठिन छ, गर्मीमा निसासिएको र पानी पर्दा रुझ्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।
चिसो भुईमा सुत्नुपर्दा चिलाउने र चिसोका बिरामी बढी रहने गरेको बन्दीहरु बताउँछन् । तत्कालिन संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ३ बर्षअघि अनुगमन गरेर संख्या घटाउने र सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न सुझाव दिएको थियो । यहाँ भने भौतिक पूर्वाधारकै अभाव भएकोले अन्य सुधार नभएको जिल्ला कारागार शाखाका प्रमुख दीपक शर्माले बताए । ‘भएको पूर्वाधारभित्रै बसेर सरसफाई र बसाईमा सुधार ल्याउने प्रयास गरेका छौं’ शर्माले भने, ‘भौतिक निर्माणमा भने केन्द्रीय कार्यक्रम र अनुदान बिना संभव छैन ।’ धेरै बन्दी भएकोले खानेबस्ने र सुत्नका लागि कठिन भएको उनले स्विकारे । २०१९ सालको पुरानो कारागार ऐन अनुसार निर्माण भएका भवनमा बन्दीहरु बस्दै आएका छन् । कारागार भित्र धेरै जनाले छुट्टाछुट्टै स्थानमा चुलो बनाएर खाना पकाउने गर्छन् । दाउरा बाल्ने चलन अझै नहटेकोले सानो कोठामा धुँवाको पनि उत्तिकै समस्या छ ।
एउटै कोठामा कोचाकोच गरेर धेरै जना सुत्ने भएकोले दुर्गन्धित भएको छ । सरसफाई अभावमा कोठामा गन्ध आएकोले बाहिर निस्केर बस्नुपरेको बन्दी दलबहादुर पौडेलले बताए । खानेपानीको समस्या समाधानका लागि नगरपालिकामा माग गरेको नेपालीले बताए । अहिले शुद्व पानी नपाएर ट्यांकरबाट ल्याएर खानुपरेको उनीहरुले बताए । धेरै जना हुँदा शौचालयमा बढी समस्या छ । रातीदेखि पालो गरेर शौच गर्नुपरेको, पानी अभावमा सरसफाई गर्न नसक्दा दुर्गन्ध बढेको समेत उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । महिला बन्दीगृह तर्फ ७ जनाको क्षमतामा १३ जना छन् । कारागारमा केही कार्यक्रम लिएर गएकाहरुले पुरुषतर्फ मात्र लगानी गरेको उनीहरुको गुनासो छ । पुरुषतर्फ मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापका लागि भलिबल, क्यारिमबोर्ड, टिभी लगायत जडान गर्ने संस्थाले महिला बन्दीगृह बिर्सेको उनीहरुले गुनासो गरे ।